Fanavotana ny firenena Tafatsangana ny vovonana FFT
Depiote Félix Randriamandimbisoa “Tsy misy atahorana ny fanenjehana ny filoha Ravalomanana”
Tsy misy atahorana ny fanenjehana ny filoha Marc Ravalomanana, hoy Randriamandimbisoa Felix, solombavambahoaka voafidy tao amin’ny boriborintany fahefatra sady filohan’ny vondrona parlematera TIM eny anivon’ny antenimieram-pirenena na dia nandeha aza ny fandrahonana ny amin’ny hisamborana azy ny herinandro lasa teo.
Dr Jean Louis Robinson Diso manjaka loatra ny tsy fanarahan-dalàna
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny dokotera Jean Louis Robinson, kandida filoham-pirenena teo aloha sady ben’ny tanàna any amin’ny kaominina ambanivohitra Ampasikely, faritra Alaotra Mangoro
TIM Boriborintany faha-4 Vonona hiatrika ny fifidianana
Nifampiarahaba nahatratra ny taona vaovao 2018 ny sabotsy teo ireo mpikambana eo anivon’ny antoko Tiako I Madagasikara ao anatin’ny Boriborintany fahefatra. Tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina no nanatanterahana izany, notarihin’ny solombavambahoaka Randriamandimbisoa Felix.
Sefom-pokontany Antsirabe I Notoloran’ny kaominina tambin-karama
Nanatontosa hetsika fifampiarahabana noho ny asaramanitra, niarahana tamin’ireo sefom-pokontany nanerana an’Antsirabe ny fiadidiana ny tanànan’Antsirabe.
KMMR manohana an’i Dada Tsy maintsy sahy miatrika ny zava-drehetra
Niarahaba manokana an’i Marc Ravalomanana tamin’ny fahazoany fandresena tamin’ilay fifaninanana “Olon’i Afrika 2017” na ny “ALM Person of the year 2017” teo amin’ny sokajy haitarika ara-politika na ny “Political Leadership” ny vahoaka maro be mpanara-dia omaly.
Nanao tohivakana tato ho ato ireo karazana fikambanana milaza ho miaro ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Nipoitra indray ny vovonana �Firaisankina ho Fampandrosoana ny Tanindrazana� na ny FFT ny sabotsy teo, tarihin�ireo minisitra efatra am-perinasa ankehitriny, ny solombavambahoaka avy amin�ny faritra sy ny loholona.
Mahatsapa izy ireo nandritra ny fanambarana nataony fa ilaina ny fifanomezan-tanana sy ny fifanampiana hahafahana mampandroso ny firenena fa tsy voatery hirona mankany amin’ny fanonganam-panjakana hatrany vao misy vahaolana. Ekena fa sahirana ny vahoaka nefa tsy azo hodian-tsy hita ihany koa ny ezaka ataon’ny fanjakana izay ilana ny fifanohanan’ny rehetra, hoy izy ireo. Vonona ny hanokatra ny varavarany sy hifampiresaka amin’ny rehetra izy ireo hisian’ny fifanohanana. Ny minisitry ny kolontsaina Jean Jacques Rabenirina, ny minisitry ny asa sy ny lalàna sosialy Maharante Jean de Dieu, ny minisitry ny fitaterana Ramanantsoa Benjamina Marcel no anisan’ny lohandohan’ny mpisorona ao anatin’ity vovonana ity.